China Eprinomectin Jekiseni 1% Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Eprinomectin jekiseni 1%
Chitarisiko: Ichi chigadzirwa hachina kuchena kune yero yakajeka yakajeka oiri mvura, zvishoma viscous.
PharmacodynamicsEprinomectin mushonga wemacrolide mu vitro uye mu vivo. Iyo anthelmintic spectrum yakafanana neiyo ivermectin. Iwo akura uye akaremara kudzinga mwero wematomu akajairika nejekiseni repasi pechigadzirwa ichi 95%. Ichi chigadzirwa chine simba kupfuura ivermectin mukuuraya Archaea, Oesophagostomum radiatum, uye Trichostrongylus serrata. Iyo ine zana muzana kuuraya maitiro pane maruva enhunzi mombe nhunzi uye yakasimba kuuraya maitiro pane mombe zvikwekwe.
Pharmacokinetics Mushure mejekiseni remukati peichi chigadzirwa (0.2 mg / kg) mumutsipa wemombe dzemukaka, iyo nguva yekukwirisa yaive 28.2 maawa, iyo yepamusoro yevasungwa yaive 87.5 ng / ml, uye iyo hafu-hupenyu hwekubvisa hwaive maawa 35.7.
Inogona kushandiswa muchienderana ne diethylcarbamazine uye inogona kuburitsa encephalopathy yakaoma kana inouraya.
Chiito uye Kushandisa
Macrolide antiparasitic zvinodhaka. Inonyanya kushandiswa kudzinga mombe endoparasites senge dumbu nematodes, mapapu, uye ectoparasites senge zvikwekwe, utunga, inda, mombe ganda ganda rinobhururuka honye, ​​uye dzinorira nhunzi.
Chipimo chemushonga uye Administration
Subcutaneous jekiseni: dhizaini imwe chete, 0,2 ml pa10 kg yemuviri uremu hwemombe.
Hapana maitiro akashata akacherechedzwa kana achishandiswa zvinoenderana nekushandisa kwakatemwa uye kuyerwa.
(1) Ichi chigadzirwa chinongori chejekiseni yepasi uye hachifanirwe kuiswa jekiseni musingaiti kana mutsinga.
(2) Iyo inopesana necollie imbwa.
(3) Shrimp, hove uye zvipuka zvemumvura zvine muchetura zvakanyanya, uye kurongedzwa kwemishonga yakasara haifanire kusvibisa sosi yemvura.
(4) Paunenge uchishandisa chigadzirwa ichi, anoshanda haafanire kudya kana kuputa, uye anofanira kugeza maoko mushure mekuvhiya.
(5) Chengeta pasingasvikirwi nevana.
1 zuva; mhou dzemukaka dzinosiya mukaka nguva 1 zuva.
Yakavharwa uye yakachengetwa munzvimbo inotonhorera, yakachengetedzwa kubva pachiedza.
Pashure: Closantel Sodium jekiseni 5%
Zvadaro: Ivermectin Jekiseni 1%
Buparvaquone jekiseni 5%
Closantel Sodium jekiseni 5%
Nitroxynil jekiseni 25%